Hotels in Nice, Antananarivo, Madagascar
Tsy dia mahagaga loatra ny trano tsara tarehy tsara tarehy tsara tarehy tsara tarehy tsara tarehy tsara tarehy tsara tarehy tsara tarehy, ny ankamaroan'izy ireo dia manankarena, ny manan-karena ary ny olo-malaza nandritra ny taonjato maro Ny lisitra dia ahitana mahagaga manan-tantara sy manorina, hotely manana fomba fijery mahafinaritra ny ranomasina, ary ny tsara indrindra amin'ny fandraisana vahiny frantsay.
Natontan'i Mary Anne Evans
Hotel Negresco any Nizza
Hotel Negresco any Nizza. Gett / Eric Nathan / LOOP IMAGES
Ny Hotel Negresco dia tranobe tsara tarehy, ary ny arivoarivo Belle Epoque izay marihan'ny kodiarana mavokely dia ivon-tsarimihetsika lehibe indrindra ao Nice. Io hotely marenina io no toerana farany hipetrahana ao Nice, miaraka amin'ny lobby manan-karena sy trano fisakafoanana 94 ary 31 suites feno tranokala antitra. Fantatra amin'ny serivisy mahagaga, ary ny morony manokana. Izy io koa dia trano fandraisam-bahiny mahasalama, miaraka amin'ny biby fiompy an-trano izay mandray ny fikajan'ny fotsy hoditra toy ny garderie mametraka rano sy sakafo ho an'ny biby fiompy na mandamina fitsangantsanganana ho an'ny biby fiompy. Le Relais Bar no toerana hahitana ireo kintana tonga teto nandritra ny am-polo taona. Ary tena avo-teknika tena izy ka mety mila fanampiana kely amin'ny jiro sy ny fahitalavitra. Azonao atao ny mihinana Michelin amin'ny sakafo ao amin'ny trano fandraisam-peo Chantecler na manandrana ny brasserie la Rotonde tsara tarehy amin'ny taom-pahaizana faha- 19 taonany, feno feno carrousel.
Vakio ny fanomboana ny hevitra, ampitahao ny vidin'ny boky sy ny boky Le Negresco amin'ny TripAdvisor
Blue Parasols eny amin'ny Beach Nice. Getty / Fraser Hall
Rehefa mitady efitrano ao Nice ianao ary manana fotoana henjana, andramo ny Radisson goavambe izay misy efitrano kokoa (331) mihoatra ny any Nice. Any amoron-dranomasina Promenade des Anglais, dia mangataha iray amin'ireo efitrano misy balkon lehibe mitazana ny rano. Eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina sy ny tanàn-dehibe taloha, lehibe tokoa ny hahatongavana aorian'ny fandefasana lava, nefa tsy tsara raha tianao ho akaiky ny asa; Tsy maintsy mandray taxi na bus ianao.
Misy varavarana teratany sy dobo ahafahanao misotro. Raha tsy izany, mankanesa any amin'ny Private Régence Plage (izay tsy maintsy aloanao), miaraka amin'ny trano fisakafoanana. Ny fidirana maimaim-poana any amin'ny foibem-pandehanana dia ny fisiana fanampiny ary ny trano fisakafoanana roa dia manolotra varimbazaha isan-karazany, na Mediteraneana na iraisam-pirenena.
Vakio ny mpitsidika vahiny, ampitahao ny vidiny ary manorata ny Radisson Blu amin'ny TripAdvisor
Hyatt Regency Palais de la Mediterranee. Getty / Atlantide Phototravel
Ao amin'ny Promenade des Anglais, ity trano fandraisam-bahiny 5 kintana ity dia manana ny zavatra rehetra andrasanao. Ao amin'ny Art Deco manan-tantara, trano fandraisam-bahiny enina, ny décor dia tsara tarehy sy maoderina amin'ny fampiononana rehetra ilainao. Misy efitrano 187, fa raha afaka manefa izany ianao dia mandehana any amin'ny efitranony ambony izay manana fomba fijery tsara. Ny dobo dia mijery ny ranomasina ary toerana ho an'ny fisotroana na sakafo. Ny trano fisakafoanana dia tena tsara, fa marefo kosa raha mozika pianô no manome ny bar ho tsara vibe. Misy ny sauna sy ny toeram-pisakafoana Tiorka sy ny orinasa ary ny fivoriana.
Vakio ny fanombohana vahiny, ampitahao ny vidiny ary manorata ny Hyatt Regency, Nice miaraka amin'ny TripAdvisor
Hoel Beau Rivage any Nizza. Getty / Thomas Winz
Raha te-ho any amin'ny zavatra mavesatra ianao, ny hotely Beau Rivage 4 kintan'ny Nice dia safidy tonga lafatra. Any an-dranomasina, ao an-tanànan'i Nice tsara tarehy tsara tarehy sady misy dingana maromaro avy ao amin'ny Place Massena, ny faritra afovoan-dalambon'i Rue de France ary ny Cours Selaya. Niorina tamin'ny taona 1860, naverina tamin'ny 2004 izy io ary amin'izao fotoana izao dia sangisangy sy ankehitriny ary efitrano malalaka. Efitrano misy latabatra mijery ny efitrano anatiny; Ny sasany dia manana faritra ivelan'ny trano. Misy ny klioban'ny lalao toradrano izay ahafahanao manakarama mpivarotra ary mijery ny fomba fijery mahafinaritra.
Ary io dia iray amin'ireo fiaramanidina mahafinaritra an'i Nice, izay manana lanjany tsara.
Tel .: +33 (0) 4 92 47 82 82
Vakio ny fanombanana avy amin'ny mpitsidika, ampitahao ny vidiny ary manorata ny Hotel Beau Rivage miaraka amin'ny TripAdvisor
Ny seranana tranainy any Nice. Getty / Ken Scicluna
Mametraka efitrano misy balkon izay manana fomba fijery ny sisin'ny tontolo eto amin'ity trano fandraisam-bahiny ity izay manana efitra 38 ary 1 efitrano. Farafaharatsiny dia toy izany no fahatsapana ao amin'ny Hotel Suisse Nice, eo amin'ny toerana misy ny moron-dranomasin'i Nice manosika ny ranomasina. Io hotely mora io dia iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra any Nice. Fantatrao daholo ireo sary mahafinaritra mahavariana nataonao tamin'ny Nice? Ny ankamaroany dia noraisina tsara teto. Ny trano fandraisam-bahiny dia eo ambanin'ny Chateau, ary mandeha 1 minitra mankany amin'ny Old Port Nice, ny Cours Selaya ary Old Nice.
Tel .: +33 (0) 4 92 17 39 00
Vakio ny fanadihadian'ny mpitsidika, ampitahao ny vidiny ary manorata ny Hotel Suisse miaraka amin'ny TripAdvisor
Nice. Getty / Salvator Barki
Any akaikin'ny seranana, ity hotely mahafinaritra ity dia manana fomba fijery mahafinaritra eny ambonin'ny ranomasina. Roa dimy minitra monja dia mandeha mankany amin'ilay tanàna taloha. Ny hotely dia naorina teo amin'ny faritra afovoan-tany, noho izany dia toa niparitaka tsikelikely ny efitrano 60 sy ny trano. Izy io dia manome ny toerana handosirana be avy amin'izany rehetra izany. Ny loko Mediterranea dia mifanandrify tsara amin'ny hotely tsara tarehy ary ny efitra dia mahafinaritra sy mazava. Ireo efitrano ambony sy Delux ihany no manana balkon na terra, koa milazà rehefa mamaky ianao raha izany no tadiavinao.
Misy trano fandraisam-bahiny tsara tarehy manana bar, restaurant le Patio izay manolotra sakafo tsara amin'ny vidiny lafo, ary dobo iray.
Tel .: + 33 (0) 4 93 62 34 63
Vakio ny fanombohana ny hevitra, ampitahao ny vidin'ny boky sy ny boky La Perouse amin'ny TripAdvisor
Ahoana ny fomba hahatongavana any Londres, UK sy Paris mankany Blois amin'ny lamasinina, bus sy fiara
Mpiara-miombon'antoka ambony indrindra any Frantsa
Manaova fitsidihana any Caen, any Normandia
Fashion, Fandefasana lamba, Teknika sy paompy any Frantsa
Torolalana ho an'ny Angers ao amin'ny Lohasahan'i Loire
Fitiavan'i Brooklyn Gay - Park Preston Gay Pride 2017
7 tanàna azonao tsidihana avy any Seattle Via Ferry
Ny valan-drano tsara indrindra any New York
Valim-panadinana Travel Travel and Travel Passport Canada
Shopping Malls & Markets any Georgetown, Penang
Ny toerana tsara indrindra 3 tsara indrindra any an-tendrombohitra
Castle Hotels in Italia
Disneyland's Parallels Parade
Pumpkintown USA dia ny mahasarika an'i Halloween Connecticut